कसरी प्रयोग गर्ने महिला कन्डम ? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
पहिलो कुरा, कतै यसको म्याद गुज्रिएको त छैन अनि राम्रो स्थितिमा छ कि छैन हेर्नुपर्छ ।
कन्डम नच्यातिने गरी होसियारीका साथ प्याकेट खोल्नुपर्छ । नङ, दाँत, चिम्टी वा तिखा गहना वा कैंची प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
अब, आफूलाई जसो गर्दा सजिलो हुन्छ त्यसअनुसार टुक्रुक्क (दिसा–पिसाब गर्ने) बस्ने वा उत्तानो पर्ने वा उभिने र त्यस्तै यसको भित्री रिङ (बन्द छेउतिरको) लाई थिच्ने र योनिमा पसाउने । यसलाई योनिभित्र सकेसम्म पसाउनुपर्छ र पाठेघरको मुखसम्मै धकेल्नुपर्छ । यसो गर्ने क्रममा कन्डम नबटारियोस भनेर विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । बाहिरी (खुलाछेउ तिर) रिङ योनिको बाहिरतिर भगोष्ठलाई राम्रोसँग छोप्ने गरी राख्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, यौनसम्पर्क सुरु गर्दा लिङ्ग महिला कन्डमभित्र नै परेको छ भनी निश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । कन्डमको बाहिरतिरबाटै योनिमा नपसोस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ, नत्र यसको प्रयोगबाट कुनै फाइदा हुँदैन । तपाईंले लिङ्गलाई समातेर ठीक तरिकाले कन्डम भित्रै पसाएर मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ।
यौनसम्पर्कपछि लिङ्ग बाहिर निकाल्नासाथ बाहिरी रिङलाई बटार्नुहोस् जसले गर्दा वीर्य बाहिरतिर नचुहिओस् । योनिबाट अब बिस्तारै बाहिर निकाल्नुहोस् वा फोहोर फाल्ने भाँडोमा केही कुराले बेरेर फाल्नुहोस् ।
त्यसैगरी यसलाई प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले तथा प्रयोग गरिसकेपछि लिंग तथा योनिको सिधा सम्पर्क नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
साभार श्राेतः कान्तिपुर साप्तहिक